फ्रान्स भर्सेज क्रोएसिया : यस्ता छन् विश्व बिजेता बन्न सक्ने ४ कारण | Jukson
पहिलोपटक सन् १९९८ मा विश्वकपमा सहभागी हुँदा नै सेमिफाइनलसम्म पुगेको क्रोएसियाले यसपटक फाइनलमा पुग्दै इतिहास बनाएको छ ।
आइतबार राति पौने ९ बजे हुने खेलमा फ्रान्सलाई हराउन सके विश्वकप विजेतामा नयाँ राष्ट्रको नाम चढ्नेछ ।
उत्कृष्ट मिडफिल्डसँगै राम्रो फिनिसिङ देखिएको क्रोएसियन टिमले विश्व फुटबलकै आयाममा विशेष प्रभाव पारेको छ ।
जर्मनी, अर्जेन्टिना, स्पेन, ब्राजिल जस्ता आश गरिएका टिमहरु निराश भएका बेला क्रोएसिया एकपछि अर्को जितको खुसी मनाउँदै छ ।
क्वार्टरफाइनलमा रसियासँग २-२ को बराबरीपछि टाइब्रेकरमा क्रोएसिया ४-३ ले विजयी भएको थियो । सेमिफाइनलमा बलियो मानिएको इंग्ल्याण्डलाई २-१ ले हराएको थियो ।
फाइनलमा क्रोएसियाले फ्रान्सलाई हराउन सक्ने आधार के छन् त ?
इभान र्‍याकिटिक, मारियो मान्जुकीज, इभान पेरिसिक, माटेओ कोभासिक र डिजेन लोभरेनले उत्कृष्ट खेल देखाइरहेका छन् । टिममा रहेका खेलाडीको औसत उमेर २७ वर्ष १० महिना छ । जसमा अनुभव सँगै आत्मविश्वास बलियो छ ।
विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुग्नुअघि नै टिमले हरेक अवस्थाको सामना गरिसकेको हुन्छ । समूह चरणदेखि बलियो देखिँदै आएको फ्रान्स पनि फाइनलसम्म पुग्दा नयाँ लयमा देखिएको छ ।
त्यो आलोचना यसपटक रसिया विश्वकपमा तोडिएको छ । अर्जेन्टिनासँगको खेल हेरौं या उरुग्वेसँगको पर्फर्मेन्स टिम उत्कृष्ट थियो । के त्यसो भए यसपटक खेलाडी फरक भएर हो त ? होइन, सबै उस्तै नै हुन् । तर, खेल्ने तरिका भने फ्रान्स टिमले फरक बनाएको छ ।
फ्रान्सले समूह चरणमा अस्टे्रलियालाई २-१, पेरुलाई १-० ले हराएको थियो भने डेनमार्कसँग गोलरहित बराबरी खेेलेको थियो ।
अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनालाई ४-३ ले हराएको फ्रान्सले क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वेलाई २-० ले हराएको थियो । सेमिफाइनलमा लयमा देखिएको बेल्जियमलाई १-० ले हराएको थियो ।
विपक्षी टिम बुझेर कोविरुद्ध कसरी खेल्ने भन्ने फ्रान्स टिमले राम्ररी बुझेको छ । त्यही नै उत्कृष्ट विशेषता हो । विपक्षी अनुसार खेल खेलेर चाहेको जस्तो काम दिन सक्ने खुबी फ्रान्सको टिममा देखिएको छ । फ्रान्सले एउटा खेल ४-३-३ को शैलीमा र अर्को खेल ४-२-३-१ को शैलीमा पनि उस्तै राम्ररी खेल्न सक्छ ।
बिम्स्टेकको अध्यक्षता श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण